Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. बंगलादेश पुगेका रोहिंगा शरणार्थी स्वदेश फर्किन थाले – Emountain TV
बंगलादेश पुगेका रोहिंगा शरणार्थी स्वदेश फर्किन थाले
एजेन्सी, ३ वैशाख । म्यान्मारको बरबर सैन्य आक्रमणबाट जोगिन बंगलादेश पुगेका रोहिंगा शरणार्थी स्वदेश फर्किन थालेका छन् । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघले भने रोहिंगा शरणार्थीलाई स्वदेश फर्कन जोखिमयुक्त भएको चेतावनी दिएको छ । बंगला देशले भने शरणार्थीहरु स्वदेश फर्कन सुरु गरेको अस्वीकार गरेको छ ।
म्यान्मारमा स्थायी रुपमा बसोवास गर्दै आएका अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय रोहिंगामाथिको दमनपछि बंगलादेश पलायन भएका मध्ये ५ सदस्यीय परिवार स्वदेश फर्किएका छन् । बंगलादेशमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका अन्य रोहिंगा समुदायले भने स्वदेश फर्केकासँग म्यान्मार सरकारले कस्तो ब्यवहार गर्छ भनी नियालीरहेका छन् ।
शरणार्थीहरु आफ्नो देश फर्किन चाहन्छन्, तर म्यान्मारमा हुने दमन र आतंकबाट तर्सिएका शरणार्थीहरु स्वदेश फर्किने वा नफर्किने भन्ने निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् । शरणार्थीहरुले एउटा परिवारलाई म्यान्मार सरकारले परिचयपत्र बितरण गर्दैमा खतरा नटरेको बताएका छन्।
त्यहाँ सबै रोहिंगा मुसलमानलाई बस्ने वातावरण र सुरक्षा प्रवन्ध नभएसम्म जानु ठीक नहुने उनीहरुको तर्क छ । गत बर्ष म्यान्मारमा रोहिंगाबिरुद्ध भएका हिंसा र आक्रमणपछि ज्यान जोगाउन अन्यत्र पलायन भएका शरणार्थीहरुको नजर म्यान्मार सरकार, सेना र त्यहाँको जनताको ब्यवहार तर्फ केन्द्रित भएको छ ।
म्यान्मारबाट गत बर्ष अगस्त महिनामा सातलाख रोहिंगा मुसलमान सीमा पार गरी बंगलादेशमा शरण लिन पुगेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघले भने म्यान्मारमा रोहिंगाहरुको जातीय सफाइ गर्ने काम भएको आरोप लगाएको छ । जबकि म्यान्मारले सो आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । राष्ट्रसंघले शरणार्थीको स्वदेश फिर्ता खतरनाक र जोखिमयुक्त हुने चेतावनी दिएको छ ।
रोहिंगाहरु म्यान्मारको रखाइन प्रान्तमा बसोबास गर्दै आएका थिए । कुनै बेला हिटलरले यहुदीहरुसँग गरेको ब्यवहार झैँ म्यान्मारमा रोहिंगासँग गरिएको ब्यवहारबारे चर्चा भैरहँदा शरणार्थीलाई स्वदेश फर्किने उपयुक्त वातावरण र सुरक्षाको ग्यारेण्टी भए सबै शरणार्थीहरु स्वदेश फर्किने सम्भावना छ ।
म्यान्मारमा करीव दश लाखको संख्यामा रोहिंगा मुसलमानहरु बस्दै आएका छन् । जसलाई अल्पसंख्यक समुदायमा सूचिकृत गरिएको छ । रोहिंग्यालाई म्यान्मारले नागरिकता प्रदान गरेको छैन । सन २०१४ मा भएको जनगणनामा उनीहरु समावेस छैनन् । सरकार उनीहरुलाई बंगलादेशबाट आएको गैरकानूनी प्रवासी बताउँदै आएको छ ।